Ezigbo ROI na Akwụkwọ Akụkọ Email
Gịnị Mere Akwụkwọ Ozi Email Ji Arụ Ọrụ?
Tọzdee, Disemba 6, 2012 Tọzdee, Disemba 4, 2012 Douglas Karr
M na nso nso a gwa m ndepụta ntanetị n'ịntanetị na otu n’ime atụmatụ ndị nwere nnukwu ụzọ bụ ịre ahịa email. Email marketing ka nwere oke nloghachi dị elu na ntinye ego, ọnụ ala ntinye, yana ọ bụ otu n'ime ole na ole teepu teknụzụ hapụrụ maka ndị na-ere ahịa ka ha ruo ndị debanyere aha ha ugbu a.
Ahịa email na-arụ ọrụ - anyị niile maara nke ahụ mana ole ka akwụkwọ ozi email gị bara uru maka nzukọ gị? You ghọtara ihe na-arụ ọrụ na ihe anaghị arụ ọrụ na ahịa email? Nwere ike gbakọọ n'ezie Nloghachi na Investment (ROI) site na mkpọsa email ma ọ bụ ezigbo uru nke onye debanyere aha email? Ndi itinye ego na ntinye aka na ahia ahia karia itinye aka na ego di elu? Ndị a infographic site na iContact egosiputa otu esi aghota uru nke ahia ahia email gi na otu esi eme ya, site na isoro uzo ahia kachasi nma nke email, inwere ike igbalite uru nke mgbasa ozi email gi.
Tags: email Marketingemail ahịa nloghachi na egoemail ahịa roiemail ahịa uruozi emailala
Ihu Ọhụrụ nke Nchọgharị Ngini Nchọpụta
CodeGuard: Weebụsaịtị ndabere na Igwe ojii
Dee 9, 2012 na 1: 58 AM
Ndi ndi oru ntaneti 93% choro ozi nke onwe ha site na udiri ihe kariri otutu ntaneti di iche iche na ntaneti ndi mmadu? Agaghị na-adabere na otú 'nso nso ahụ bụ.